धेरै कथाहरू र हिउँको धेरै संग6रीडिंग वर्तमान साहित्य
हिउँ, हिउँ र अधिक हिउँ। यो एक वर्षको यी दिनहरूमा हामी सब भन्दा देख्छौं जुन सबल भयो र पाठ्यक्रमको चिसोसँग शुरू भयो। लगभग पूरै देश यो मुनि छ र यो थोपेको छ, किनकि घरमा बाँच्नको अरू कुनै विकल्प छैन। गर्नु पर्ने? राम्रो किताब खोज्नुहोस् र पढ्नुहोस्। र यदि तपाईं हिउँको प्रेमी हुनुहुन्छ भने, विशेष गरी र ती पुस्तकहरूसँग रमाउनुहोस्। त्यसैले त्यहाँ जान्छ tit शीर्षकहरूको चयन धेरै हिउँ संग: National राष्ट्रिय लेखकहरूबाट, एन्रिक लासो, जुलियो लालामाजारेस र जेभियर कास्टिल्लो, र Nordics बाट 3, क्यामिला लकबर्ग, शमूएल बर्जक र जो नेस्बे.
1 सबैभन्दा गाढा हिउँ - एनरिक लसो
2 हिउँ केटी - जेभियर कास्टिल्लो
3 हिउँको मेमोरी - जुलियो लामाजारेस
4 हिउँ तूफान र बदाम गन्ध - क्यामिला लकबर्ग
5 हिउँमा केटा - शमूएल बर्जक
6 हिममानव - जो नेस्बे
सबैभन्दा कालो हिउँ - एन्रिक लासो
Un स्व-प्रकाशनको बेन्चमार्क, मा विशेषज्ञ marketing, १ millions भाषाहरूमा विश्वव्यापी रूपमा बेचिएका लाखौं ईबुकहरूसँग, र उपन्यास गरिएको श्रृंखलाका निर्माताहरू एफबीआई एजेन्ट एथान बुश, एनरिक Laso हामीलाई छोडेर लगभग years 46 बर्ष अघि करीव तीन। यो शीर्षक हो छैठौं उनको लोकप्रिय शृ and्खलाको र बुशको अनुसन्धान बताउँदछ, निर्मित मोन्टानामा विस्थापित, ए मा सिरियल किलर जसले पहिले नै पाँच जना जवानहरूलाई मारे।
हिउँ केटी - Javier Castillo
कास्टिलो अर्को सन्दर्भ र प्रकाशन घटना हो जुन उनले आफ्नो पहिलो उपन्यासको साथ प्राप्त गरे, त्यो विवेक हराएको दिन, जुन तिनीहरू पछ्याउँदछन् दिन प्रेम हराएको थियो मिरन्डा हफको साथ सबै भयो र यो अन्तिम शीर्षक.
न्यू योर्क मा सेट 1998 र धन्यवाद परेडको समयमा। त्यहाँ केटी Kiera Templeton गायब हुन्छ र पछि कसैले उसले लगाएको लुगाको छेउमा कपालको केशहरू फेला पार्दछ। जम्पमा 2003, र त्यो दिन जब Kiera आठ वर्षको भयो, उनको आमा बुबा एक प्राप्त अनौंठो प्याकेज: कियराको एक मिनेट लामो रेकर्डिंगको साथ एक VHS टेप अपरिचित कोठामा खेल्दै।
ट्रिग्स हेर्नुहोस्, को एक विद्यार्थी पत्रकारितासुरु गर्नुहोस् समानान्तर अनुसन्धान घटनाको र पत्ता लगाउँदछ कि दुवै उसको जीवन र कियराको भरिएका छन् अज्ञात.
हिउँको सम्झना - जुलियो लामाजारेस
यो प्रकाशित भएको थियो 1982 र यो हो दोस्रो पुस्तक त्यो जुलियो लामाजाजारहरूले लेखेका थिए। भएको छ सर्वश्रेष्ठ सम्पादन पुस्तक २०२० को लागि राष्ट्रीय पुरस्कार। एक घनिष्ठ र लिरिकीय स्वरको साथ, लेखक हराएको र पुनः खोजिएको ल्यान्डस्केपहरू आफ्नो स्मृतिमा प्रयोग गर्नुहुन्छ जहाँ हिउँ, पशुहरू वा पहाडहरूको मौन छैन।
हिम आँधी र बदामको गन्ध - क्यामिला लकबर्ग
र हामी ती सबैसँग जान्छौं जुन हिउँ, बरफ र सेतो हिउँको बारेमा राम्रोसँग जान्दछन्: नॉर्डिक्स। हामी लोकप्रिय लेखक, स्विडेनी क्यामिला लकबर्ग, जो उनको शृंखलाको साथ शुरू गर्दछौं Fjällbacka को अपराध, विश्वव्यापी २ 23 मिलियन भन्दा बढी प्रतिलिपिहरू बेचिएको छ। यो उनको अर्को शीर्षक हो, क्रिसमस मा सेट, र जो पनि समावेश छ Short छोटो कथाहरू, स्वतन्त्र तर Fjällbacka र उसका चरित्र जस्तै ब्रह्माण्ड मा अवस्थित।
हिउँमा केटा - शमूएल Bjørk
नर्वेलीहरू, चिसो, हिउँ र असल अपराध उपन्यासका अन्य राजाहरूसँगै जोडिएका छन्। यो शमूएल Bjørk यो अनुभवीले बनेको जोडीलाई अभिनय गर्ने श्रृंखलामा तेस्रो शीर्षक हो होल्गर मुन्च र धेरै चतुर तर समस्याग्रस्त छ मिया क्रुगर। दुबै व्यक्तिले ती चकित पार्ने धारावाहिक हत्याराहरू मध्ये एकको सामना गर्नुपर्नेछ, एक जसले आफ्ना शिकारहरूलाई अनियमित रूपमा पूर्ण रूपमा छनौट गर्दछ।
हिममानव - जो नेस्बे
हामी संग अन्त नेस्बेअवश्य। उसको सबैभन्दा प्रसिद्ध शीर्षक, हुनसक्छ, र सातौं को श्रृंखला को 12 कि पहिले नै आफ्नो धेरै कुटपिट र मादक फिर्ता राम्रो को नेतृत्व गर्दछ ह्यारी प्वाल. यो सायद सबैभन्दा पूर्वानुमान गरिएको पनि हो र ती मध्ये एउटा पनि हो शानदार अन्त्यहरू त्यो घरको ब्रान्ड हो।
तिनीहरूले मा कुनै हिट गरेन फिल्म अनुकूलन तिनीहरूले उसलाई गरे, र उनको मूल कागज कहानी पक्कै पनि धेरै मूल्यवान छ। यसमा, ह्यारी होलले अनुसन्धान गर्नुपर्छ महिलाहरूको हत्याको श्रृंखला जसको वरपर एउटा हिउँको जहिले पनि देखा पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » विभिन्न कथाहरू र धेरै हिउँको साथ read पठनहरू
हिमपातको समयमा लुइस रोजो यस सूचीमा हुन सक्छन्।
उत्कृष्ट सूची, "द स्ल इन इन द स्नो" ले मेरो ध्यान खिचेको छ र यसको कथानक मेरो लागि ज्यादै रमाईलो देखिन्छ।
सब भन्दा सामान्य हिज्जे गल्तीहरू